DEG DEG-Arrin argagax leh oo ka dhacday Boosaaso, xaafado lagu kala cararay & meyd si arxan darro ah loo diley oo yaalla.
Wararkii ugu dambeeyey ee galabta naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in duhurnimadii Maanta xaafad ka tirsan Magaaladaas laga helay Meydka gabar yar oo si arxan darro ah loo dilay.
Meydka Allaha u naxariistee marxuumadda ayaa waxaa laga helay xaafadda Raf iyo Raaxo ee Boosaaso, isla markaana waxaa qaar kamid ah dadkii tegey xaafadda gabadha laga soo qaaday ay sheegeen in wajiga laga gaarsiiyey dhaawacyo aad u culus.
Waxaan weli si rasmi ah loo aqoonsan meydka marxuumadda sida ay shegeen dad ku sugan goobta laga helay, waxaana la geeyay Isbitaalka guud ee Magaalada, iyadoona halkaas ay tageen boqolaal qof oo doonayay inay arkaan Meydka gabadha.
Guud ahaan magaalada Boosaaso ayaa maanta laga hadal hayaa dhacdadaan, waxaana dadka qaarkood oo la hadlay warbaahinta ay u sheegeen inay ka xun yihiin falka dhacay, sidoo kalena laamaha amniga Puntland ugu baaqay inay baaritaano deg-deg ah sameeyaan.